Caliber 3.4 iri pano nekunatsiridza yako ebook raibhurari | Linux Vakapindwa muropa
Iyo inozivikanwa Calibr appe, iyo inowanikwa kune akati wandei masisitimu anoshanda, kusanganisira GNU / Linux, ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa uye neanonyanya kushanda pakati peaya aripo ekugadzirisa ebook. Kwete chete iyo inobvumidza iwe kuti uwane mukana kune ako ebook, mune chero fomati yavari. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuti utarise uye nekuzvishandura pakati pemafomati, pakati pezvimwe zvakawanda sarudzo. Iyo inotsigira akawanda mafomati, kusanganisira iyo inonyanya kufarirwa PDF uye EPUB. Ichokwadi ndechekuti ini ndinoshandisa iyo yakawanda kushandura pakati pemafomati, imwe neimwe kana mumabatch emabhuku.
Kumwe kugadzirisa kwekuita kunodiwa, zvirokwazvo, kunyangwe hazvo, ikozvino nekuuya kweshanduro iyi nyowani Caliber 3.4 kuti ine zvimwe zvinatsiridzwa, ini ndichafanirwa kuongorora kana zvachinja mune chimwe chinhu nezvazvo. Sezvaunoziva, pakati pemabasa aishandiswa pakanga paine mukana zvakare wekugona kuunza kunze kwenyika nekusununguka kubva kune akakosha ebook evaverengi pamusika. Nekuuya kweiyo nyowani yakagadzikana vhezheni yeiyi yakavhurwa sosi app, inoitirwa kugadzirisa dzimwe dzenyaya dzaifanirwa kukwidziridzwa mushanduro dzapfuura.
Kubva vhezheni 3.3 yeCaliber iyo interface yakagadziridzwa sezvakataurwa nevagadziri. Uye zvakare, zvimwe zvipembenene zvakaitika kazhinji zvakagadziriswa. Senge sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, ivo vanogadzira vakatorawo mamwe marongero uye mashandiro, sekuwedzera a nzira nyowani yekutengesa kunze mabhuku kuchikwata chako. Mune mupepeti pane ikozvino basa nyowani kusarudza mafaera ekuendesa kunze uye inobvumidza nenzira yakapusa kufamba uye kusarudza zvese zvatiri kuda kuwedzera.
Dzimwe gadziridzo dzinoendawo kuburikidza nekubatanidzwa kwekuvandudzwa maererano nemitauro, nezvimwe. Iyo bugs yakagadziriswa uye kuvandudzwa kwekodhi kuchaita kuti chirongwa chishande zvirinani nekuburitswa kutsva uku. Vamwe vashandisi vakataura mamwe matambudziko kubva pakuburitswa kwekupedzisira uye ndizvo zvakamboshandirwa kuitira kuti vange vasipo mune yazvino vhezheni ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Caliber 3.4 iri pano nekunatsiridza yako ebook raibhurari
Kupotsa kuri pasina "h"
Pindura kuna Sourcerer